द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | जनवरी 12, 2022 | लिखित र मौखिक संचार कौशल
तपाईंले सन्देशहरू पठाउन वर्षहरू खर्च गर्न सक्नुहुन्छ इमेल कहिल्यै "CCI" को सहारा नगरी। यद्यपि, यदि इमेल व्यावसायिक सेटिङमा प्रयोग गरिन्छ भने, यसको योग्यता र यसको प्रयोग जान्न आवश्यक छ। यसले यसलाई बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गर्न सम्भव बनाउँछ। यसरी, यदि हेडरमा प्रेषक र प्राप्तकर्ता खण्डहरू सजिलै बुझ्न सकिन्छ। "CC" को अर्थ कार्बन प्रतिलिपि र "CCI" को अर्थ अदृश्य कार्बन प्रतिलिपि, कम छन्। यसबाहेक, धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई थाहा छैन कि यो एक्रोनिम के हो।
अन्धो कार्बन प्रतिलिपिले के बुझाउँछ?
कार्बन प्रतिलिपिलाई साँचो कार्बन प्रतिलिपिको लागि श्रद्धांजलिको रूपमा देख्न सकिन्छ जुन प्रतिलिपि सिर्जना गर्नु अघि अवस्थित थियो र जसले कागजातको प्रतिकृतिहरू राख्न अनुमति दिएको थियो। यो एक डबल पाना जस्तै हो जुन मुख्य पाना मुनि राखिएको छ र तपाईले लेख्नु भएको सबै कुरा लिन्छ। यो चित्र को लागी धेरै पाठ को लागी प्रयोग गरिन्छ। यसरी यसलाई दुईवटा पानाहरू बीचमा राखिएको छ, जसमध्ये पूर्ण रूपमा तलको एउटा माथिको नक्कल हुनेछ। यदि आज नयाँ प्रविधिको आगमन संग यो अभ्यास शायद नै प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस प्रणालीको प्रयोग गरेर लग बुकहरू प्रतिलिपिहरूसँग इनभ्वाइसहरू स्थापना गर्न बारम्बार हुन्छन्।
CCI को उपयोगिता
"CCI" ले तपाइँलाई तपाइँको प्राप्तकर्ताहरूलाई "To" र "CC" मा लुकाउन अनुमति दिन्छ जब तपाइँ समूह पठाउनुहुन्छ। यसले कसैको जवाफलाई अरूले देख्नबाट रोक्छ। यसरी "CC" लाई सबै प्राप्तकर्ताहरू र प्रेषकहरूद्वारा देखिने डुप्लिकेटको रूपमा मानिन्छ। जहाँ "CCI", शब्द "अदृश्य" ले संकेत गर्दछ, अन्य प्राप्तकर्ताहरूलाई "CCI" मा भएकाहरूलाई हेर्नबाट रोक्छ। त्यसपछि मात्र प्रेषकले तिनीहरूलाई हेर्न सक्षम हुनेछ। यो कामको लागि महत्त्वपूर्ण छ, यदि तपाईं छिटो जान चाहनुहुन्छ भने, जवाफहरू सबैलाई देखिने बिना।
रिड एक सफल तलब वृद्धि अनुरोध को लागी पत्र टेम्पलेट
किन CCI प्रयोग गर्ने?
"CCI" मा इमेल पठाएर, यस खण्डमा प्राप्तकर्ताहरू कहिल्यै देखा पर्दैनन्। यसैले, यसको प्रयोग व्यक्तिगत डेटा सम्मान गरेर उत्प्रेरित हुन सक्छ। व्यावसायिक वातावरणमा के महत्त्वपूर्ण छ। वास्तवमा, इमेल ठेगाना व्यक्तिगत डेटा को एक घटक तत्व हो। एक व्यक्तिको फोन नम्बर, पूरा नाम वा ठेगाना जस्तै। सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृति बिना तपाईले चाहानु भए अनुसार साझेदारी गर्न सक्नुहुन्न। यी सबै कानूनी र न्यायिक उत्पीडनहरूबाट बच्नको लागि "ICC" को शोषण गरिएको छ। थप रूपमा, यो एक साधारण प्रबन्धकीय उपकरण हुन सक्छ जसले तपाईंलाई एक अर्कासँग सञ्चार नगरी धेरै आपूर्तिकर्ताहरूबाट छुट्टै डाटा प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। धेरै कर्मचारीहरू, धेरै ग्राहकहरू, इत्यादिको लागि पनि यही सत्य हो।
विशुद्ध व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट, "BCC" प्रयोग नगरी बल्क इमेलहरू पठाउँदा तपाइँको प्रतिस्पर्धालाई चाँदीको थालमा डाटाबेस प्रदान गर्न सक्छ। तिनीहरूले केवल तपाईंको ग्राहक र आपूर्तिकर्ताहरूको इमेल ठेगानाहरू पुन: प्राप्त गर्नुपर्नेछ। दुर्भावनापूर्ण व्यक्तिहरूले पनि धोखाधडी हेरफेरको लागि यस प्रकारको जानकारी चोरी गर्न सक्छन्। यी सबै कारणहरूका लागि, "सीसीआई" को प्रयोग पेशेवरहरूको लागि लगभग अनिवार्य छ।
ईमेलमा CCI राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस् जनवरी 11th, 2022Tranquillus
अघिल्लो२०२१ मा ध्यान र औषधि: हेरचाहको प्रशंसा?
निम्नआर संग तथ्याङ्क को परिचय
प्रभावी इमेल लेखनको रूपरेखा
कुन विनम्र वाक्यांश "Pending ..." संरचना पछ्याउनु पर्छ?
जानकारी कसरी समिकरण गर्न सिक्नुहोस्, यो प्राप्त गर्न सबै सुझावहरू